KFC ကြက်ကြော် | Wutyee Food House
« ‘ဂျပန် တို့ဟူးကင်’
October 1, 2011 by chowutyee
KFC ကြက်ကြော်က ကမ္ဘာမှာ နံမည်အကြီးဆုံး ကြက်ကြော်တစ်မျိုးပါ။ KFC ကြက်ကြော် ချက်နည်းအတိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကြော်ဖူးတာပါ။ KFC ကြက်ကြော်နဲ့ အရသာရော၊ ပုံပါ တော်တော်ကို တူတာမို့ ချက်နည်းကို အားလုံးကို မျှဝေပေးချင်လို့ပါ။ လုပ်ရတာလည်း လွယ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကြက်သားနှပ်ထားချိန်ကတော့ ၁ရက်နီးပါးတော့ အချိန်ပေးရပါတယ်။ ချက်နည်းကို ကြည့်ရအောင်…
ကြက်သားကို နုပ်ထားရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ
ကြက်ပေါင်နဲ့ ရင်ဗုံ – ၄ခု
ပိုတက်စီယမ်ဆား- စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း (ထည့်ချင်က ထည့်နိုင်သည်၊)
အချိုမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၈ပုံ၁ပုံ
ကြက်ပြုတ်ရေ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
ကြက်ဥ – တစ်လုံး
နွားနို့ – ၂၀၀ မီတာ
ဂျုံ – ၁၀၀ ဂရမ်
ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်းခွဲ
ဆနွင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၈ပုံ၁ပုံ
ဆိုဒါ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၈ပုံ၁ပုံ
၁။ အရင်ဆုံး ကြက်သားကို နုပ်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ( အချိုမှုန့်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ ဆား၊ ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်၊ ကြက်ပြုတ်ရည်) တို့ဖြင့် သမအောင် နုယ်ပြီ အနည်းဆုံး ၂၄နာရီ တစ်ညသိပ်ထားပေးပါ။
၂။ ကြက်သားများကို တညသိပ်ပြီ နုပ်ပြီမှ ကြက်ဥနှင့် နွားနို့များကို ခွက်တစ်ခုထဲတွင် သမအောင် ခလောက်ပေးထားပါ။
၃။ ပြီမှ ဂျုံမှုန့်နှင့် ( ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ဆား၊ ဆနွင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်၊ ဆိုဒါ) တို့အားလုံး ဇလုံတစ်ခုထဲ သမအောင် ရောမွှေလိုက်ပါ။
၄။ ပြီလျှင် ကြက်ပေါင်ကို ခလောက်ထားသော ကြက်ဥခွက်ထဲနှစ်ပြီ ဂျုံမှုန့်များဖြင့် လိပ်လိုက်ပါ။
၅။ ထို့နည်းအတိုင်း ကျန် ကြက်ရင်ဗုံ၊ ပေါင်ကို ကြက်ဥနှစ်ပြီ ဂျုံကပ်ပေးပါ။
၆။ ကြက်ကြော်တဲ့အခါ ပိုကြွပ်ရွစေရန် ဂျုံကပ်ပြီသား ကြက်ပေါင်၊ ရင်ဗုံများ ကြက်ဥခွက်ထဲ ပြန်နှစ်ပြီ ဂျုံနောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မန် ကပ်ပေးပါ။
ရ။ ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်ကာ ဆီပူလာလျှင် ဂျုံကပ်ထားသော ကြက်ပေါင်၊ ရင်ဗုံများကို အညှိရောင်သန်းသည်အထိ ကြော်ပေးပါ။
၈။ KFC ကြက်ကြော်များကို အာလူးကြော်၊ ဆော့ဖြင့် တွဲဖက်ကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း | 44 Comments
on October 1, 2011 at 8:36 am | Reply nyunt nyunt win
thanks.how to get potassium?instead of potasssium what can i use,please?
on October 4, 2011 at 6:58 am | Reply chowutyee
ပိုတက်ဆီယမ် ဆားကို ပြောတာပါ..
on October 1, 2011 at 8:58 am | Reply thitsar
on October 4, 2011 at 6:59 am | Reply chowutyee
ဆိုဒါ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုတက်ဆီယမ် ဆားကို ပြောတာပါ..
on October 1, 2011 at 8:59 am | Reply thitsar
မ၀တ်ရည်ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကြက်ကြော်အရမ်းကြိုက် တာ အိမ်မှာလုပ်စားအုံးမယ် စိတ်ချ
on October 1, 2011 at 10:40 am | Reply chowutyee
Plz try it.. 😛
on October 1, 2011 at 9:57 am | Reply ခင်ယမုံ
အစ်မက ကြက်ကြော်ကိုအရမ်းကြိုက်တော့ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြော်စားတာ..
ဒီတစ်ခါ ညီမပြောသလို ကြော်စားမယ်..
on October 1, 2011 at 10:36 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ မခင်ယမုံ လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. 🙂
on October 1, 2011 at 10:00 am | Reply Yan Naing
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ အခုလေးတင် KFC ကြက်ကြော်စားပြီးသွားတာ။ နောက်ဆိုရင် အိမ်မှာ လုပ်စားကြည့်မယ်။ ကျေးဇူးပါ။
on October 1, 2011 at 10:35 am | Reply chowutyee
on October 1, 2011 at 10:27 am | Reply Sithu phyo
Wutyee. Can i give u some idea? Chicken resting time is so long. So u can try to use cooking wine with marinate at time. Only 1 tbs is enough. After marinate finished within3or4hrs u can start to make.
Thanks Friend!! I will try it.. Thanks you so much! 😀
on October 1, 2011 at 2:25 pm | Reply မြတ်
ပိုတက်ဆီယမ် ဆားကို ပြောတာပါ.. ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါနော်…
on October 1, 2011 at 2:54 pm | Reply Dare
What is Potassium and where can I buy in Singapore? Pls reply me and my husband luv to eat KFC so much.
on October 4, 2011 at 7:00 am | Reply chowutyee
ပိုတက်ဆီယမ် ဆားကို ပြောတာပါ.. စင်ကာပူမှာ ၀ယ်လို့ ရမရတော့ ၀တ်ရည် သိပ်မသိဘူး။ မထည့်လျှင် ရတယ် အရသာက ဒီအတိုင်းပါပဲ
on October 2, 2011 at 5:39 am | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ကြည့်တာနဲ့ ဗိုက်ဆာလာတယ်။ စားကောင်းလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်း
on October 4, 2011 at 7:01 am | Reply chowutyee
မချော လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. အ၇မ်းစားကောင်းတယ်.
on October 2, 2011 at 7:19 am | Reply Hmone gyi
Wowww I love KFC and I really going try and treat me too 🙂
on October 4, 2011 at 7:02 am | Reply chowutyee
ကိုယ်ဆို ကျွေးပြီသား… ကိုယ်ဝယ်စားမနေနဲ့ လုပ်ပဲစားတော့…
on October 4, 2011 at 4:06 am | Reply myattun naing
ပိုတက်ဆီယမ် က ဘာလဲ သူမပါရင် ဘယ်လို အရသာပြောင်းသွားမှာလဲ
on October 4, 2011 at 6:51 am | Reply chowutyee
ဘာမှ အရသာမပြောင်းပါဘူး။ ပိုတက်ဆီယမ် ဆားကို ပြောတာပါ။ မထည့်လည်း ရတယ်။ ၀တ်ရည်က သူချက်နည်းအညွှန်းကို အပြည့်အစုံထည့်ရုံပါပဲ….
on October 4, 2011 at 7:57 am | Reply Dare
Thanks Wut Yee to reply 😀
on October 5, 2011 at 4:26 am | Reply chowutyee
on October 5, 2011 at 3:06 pm | Reply hnin phyu
ဘေးနားက အားလူးကျော် ကျော်နည်းလေပါ ကျေးဇူးပြုပြီးေ၇းပေးပါလာနော် 😉
on October 6, 2011 at 2:53 am | Reply chowutyee
အာလူးကြော်က ဆားလေးထည့်နုယ်ပြီ ကြော်ရုံပါပဲ နှင်းဖြူ…. 😀
on October 9, 2011 at 4:16 pm | Reply hnin phyu
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်နော် 🙂
on November 4, 2011 at 4:31 pm | Reply meme
on November 8, 2011 at 12:57 pm | Reply chowutyee
Thanks Me Me!! 😀
on November 8, 2011 at 5:12 pm | Reply viOlet
on November 18, 2011 at 4:25 pm | Reply chowutyee
ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်မရှိရင် ကြက်သွန်ဖြူကို ထောင်းပြီ ထည့်လိုက်ရင် ရပါတယ်.. ဆိုဒါကိုတော့ CityMart မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်
on November 27, 2011 at 8:50 am | Reply thinzar
အမ တချို့ KFC ကြက်ကြော်က cheese နဲ့ကြော်တာလေ ဘယ်အချိန်ထည့်ကြော်ရမလဲ ဂျုံနဲ့ကပ်တဲ့အချိန်လား
on November 27, 2011 at 2:08 pm | Reply chowutyee
on January 8, 2012 at 10:58 am | Reply san
တစ်ည သိပ်ရမယ်ဆိုတာ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာလား၊ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းလား
on January 9, 2012 at 12:37 am | Reply chowutyee
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်သိပ်ရမှာပါ.. 🙂
on January 25, 2012 at 9:52 am | Reply Aung Zaw Htaik
Please advice me how to make spicy fried chicken?
on January 25, 2012 at 12:55 pm | Reply chowutyee
I will post this recipe soon!! 🙂
on February 15, 2012 at 9:05 am | Reply Rohma
အမ..ကြက်ကပြုတ်ပြီးမှနှပ်ကတာလားအစိမ်းတိုင်းနှပ်ကမှာလားဟင်… ကြက်ပြုတ်ရည်ပါထဲ့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့နဲနဲConfuse ဖြစ်သွားလို့ပါ…. ဖြေပေးပါနော်.. ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
on February 16, 2012 at 2:10 pm | Reply chowutyee
ညီမ ကြက်သားအစိမ်းကို နုပ်ရမှာပါ။ ကြက်ပြုတ်ရည်ကတော့ ရှိရင်ပေါ့၊ မ၇ှိရင် ရိုးရိုးေ၇ပဲ ထည့်လို့ရပါတယ်.. 🙂
on February 20, 2012 at 2:46 pm | Reply chit thet
I like to do it next time.
on February 21, 2012 at 9:42 am | Reply chowutyee
Plz try it!
on April 19, 2012 at 6:42 am | Reply sansan
ညီမလေး အထဲထိမကျက်ချင်သလိုဖြစ်နေတယ်အမဘာမှားနေလဲမသိလို့ 🙂
on April 19, 2012 at 1:48 pm | Reply chowutyee
ကြက်ကြော်တဲ့အခါ မီးကို အသင့်တင့်နဲ့ကြော်မှ အပြင်ရော၊ အထဲပါ ကျက်တာ ညီမ။ မီးအရမ်းပြင်းရင် အပြင်ပဲ ကျက်ပြီ အထဲက မကျက်တော့ဘူး.. Plz try it again.. 😀
on May 10, 2012 at 3:02 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] October 1, 2011 KFC ကြက်ကြော် […]